VIDEO CONVERTER FREE SI WONDERSHARE - MMEMME - 2019
Video converter free si Wondershare
Mgbe ha na-ede ihe nyocha banyere mmepụta data data site na Wondershare Onye Mmepụta, ha chọpụtakwara na ebe nrụọrụ weebụ a na-agbanwe vidio n'efu ma kpebie ibudata ya iji hụ ihe ọzọ ọ ga-eme.
O wee pụta na ihe omume ahụ dị mma, ị nwere ike ọbụna ikwu na otu n'ime ọrụ kachasị elu na arụ ọrụ na mpaghara nke free, nke na-agụnye, na mgbakwunye na onye ntụgharị, nwekwara ohere dị mma maka nhazi vidio. Ya mere, m na-agwa gị ka ị hụ otú ị nwere ike isi tọghata vidio (ọ bụghị naanị) ka Wondershare Video Converter Free.
Rịba ama: usoro a abụghị Russian, ma ihe niile doro anya. Ọ bụrụ na interface asụsụ Russian dị gị mkpa, wee lee anya ebe a: The best free video converters in Russian.
Ịnwere ike ibudata nsonaazụ vondershare free na vidershare na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị www.wondershare.com/pro/free-video-converter.html. N'adịghị ka "ndị ọrụ" gị na ụlọ ahịa ahụ, usoro a anaghị anwa ịbịakwunye gị software ndị ọzọ, mgbe ọ na-adịghị mkpa na ọbụna na-emerụ ahụ, ya mere ịnwere ike iwunye ya nke ọma.
Mgbe ịmechara, ị ga-ahụ otu interface dị mfe na nke na-enweghị mgbagha. Ya mere, gịnị ka a ga-eme na windo nke usoro ihe omume ahụ:
Tinye vidiyo (ọtụtụ) ma ọ bụ họrọ DVD ọ bụrụ na ịchọrọ ịtụgharị ya.
I nwekwara ike ịgbakwunye ndepụta okwu na vidiyo, ụda, ị nwere ike ikpokọta vidiyo niile na listi na faịlụ ikpeazụ.
Mgbe ị pịrị bọtịnụ "Dezie", ị ga-abanye nchịkọta vidio ahụ wuru, nke a ga-ede banyere nkewa n'okpuru.
Nhọrọ nke usoro dị nnọọ mma, gbakwunyere ihe niile a ga-ahazi iji kwado mkpa gị. Ị nwere ike ịmegharị vidiyo gaa AVI, MP4, DIVX, MOV, WMV, MP3, ma ọ bụrụ na ịchọrọ iwepụ ụda si vidiyo na usoro ndị ọzọ. Ntinye profaịlụ arụnyere maka gam akporo, iPhone na iPad adịghị maka n'efu, ma ị nwere ike iji ndị dị na ya ma dezie ihe ndị dị mkpa ka vidiyo na arụ ọrụ ahụ.
Ejikọta na nchịkọta vidiyo
Dịka e kwuworo, onye ntaneti vidiyo a nwekwara editọ vidiyo, nke a na-akpọ site na ịpị bọtịnụ "Dezie" na-esote faịlụ ahụ agbakwunyere. Lee ụfọdụ atụmatụ nke editọ a:
Vidio vidiyo (Gbanyụọ, wepụ ihe na-enweghị isi na usoro iheomume).
Tinye ihe omimi ka vidiyo
Kwere, ọ bụghị ihe ọjọọ maka usoro n'efu.
Na mgbakwunye na ngwa ndị e depụtara, Wondershare Video Converter Free nwere ike ịba aka ma ọ bụrụ na ịchọrọ ọkụ DVD (ọ na-akwado ndekọ kpọmkwem na diski ma ọ bụ ISO).
DVD ọkụ na Wondershare Video Ihe Ntụgharị
Ihe ọzọ nwere ike ime bụ na na "Download" taabụ na usoro ihe omume ị nwere ike ibudata vidiyo na Ịntanetị, naanị ịkwesịrị ịkọwa adres nke ibe vidiyo site na ịpị bọtịnụ "Tinye URL" ma malite ibudata.
N'ịkọkọta elu, enwere m ike ịsị na maka ụdị ngwanrọ nke ụdị ọrụ a, vidiyo a dị ezigbo mma.